PressReader - Ilanga: 2019-01-14 - Abakutshala kubafundi kuthela okuhle
Abakutshala kubafundi kuthela okuhle
Yize sebathatha imihlalaphansi abanye sebekobandayo
Ilanga - 2019-01-14 - Izindaba - MTHOBISI SITHOLE [email protected]
BASIZWE wukungaqhoshi ngezikhundla othishanhloko abasha bezikole ezinomlando omuhle wokukhiqiza imiphumela ebabazekayo kamatikuletsheni KwaZulu-Natal, abaqhubeke lapho kushiye khona abebephethe ngaphambi kwabo.
Kulezi zikole kubalwa iMenzi High eyayiphethwe nguMnu Felix Mshololo odlule emhlabeni ngo2015, iVelabahleke High School ebiphethwe nguMnu Mbongeni Mtshali othathe umhlalaphansi - okuyizikole zaseMlazi - noMhlwaneni High School waseMnambithi obuphethwe uMnu Bongani Kubheka naye othathe umhlalaphansi nyakenye kuqala unyaka.
Zontathu lezi zikole zihambe phambili ezifundeni zazo ngokuthola o-100% zibe zinenqwaba yabafundi kwamatikuletsheni. UMhlwaneni High ongaphansi koThukela, ubunabafundi abawu-134 kumatikuletsheni, wakhiqiza amaBachelor awu-121 nama-diploma awu-13.
Uthishanhloko wakhona, uNkz Nondumiso Nxasane, uthe kawukho umlingo abawenzile ngaphandle kokubambelela kobekwenziwa nguMnu Kubheka ngesikhathi esaphethe isikole.
“Ukuhloniphana kothisha nokukholelwa kwesikwenzayo yikhona okuyiqhinga lethu lokunqoba. Siyabatshela-ke nabafundi ukuthi umuntu uhlaba kanye adlule kulesi sikole ngoba kawuphindwa umatikuletsheni. Ithuba elisuke linikezwe umfundi kusuke kungelokuqala kungelokugcina,” kusho uNkz Nxasane. Uthi okunye okubasebenzela kakhulu wukuthi abazali babambisene nomphakathi, kakwenzeki bangayi esikoleni uma bebizwa.
“Amaholide nezimpelasonto sikuzwa ngendaba ngoba sihlala esikoleni nezingane kufundwe. Mhlawumbe nokuthi esikoleni sethu kufundisa othisha okwakuyizingane ezazifunda eMhlwaneni eminyakeni edlule, kuyasilekelela ngoba bayalazi isiko,” kusho uNkz Nxasane.
Uthishanhloko omusha waseVelabahleke High, uMnu Bheki Mhlongo, uthi basizwe wukugcina isikompilo elaliqalwe nguMnu Mtshali.
“Uma umntwana esafunda uGrade 11, ngoLwezi (November) simqalisa isilabhasi yakwaGrade 12 ngoba sisuke senzela ukukhathula siphinde sivule unyaka zingakavuli izikole, ziningi.
“Njalo ngokuphela kwenyanga siba nomhlangano nabafundi bakwaGrade 12, sibukisane amaphu- tha abo ezifundweni bese kuthi abangaphasanga isigaba nesigaba ngasinye sonyaka, ngibonane nabo umuntu ngamunye,” kusho uMnu Mhlongo.
Umatikuletsheni wakhe ubunabafundi abawu-185, abawu-128 bathole ama-bachelor, abawu-38 ama-diploma kanti abawu-19 ama-higher certificate.
EMenzi High School bebewu-212 kumatikuletsheni, baphasa bonke kanti isikole sesiphethwe nguNkz Muntu Ntombela.
IZITHOMBE: YINQOLOBANE YELANGA
UMNU Bongani Kubheka owayenguthishanhloko waseMhlwaneni High, oshiye umlando esikoleni sakhe wahlonishwa nasemnyangweni wezemfundo eyisiSekelo
WAYEZIBAMBELA mathupha emakilasini owayenguthishanhloko waseVelabahleke, uMnu Mbongeni Mtshali.